Xildhibaanno Hiiraan u tagay Wadatashiyada Bulshada – Radio Muqdisho
Xildhibaanno Hiiraan u tagay Wadatashiyada Bulshada
Wafdi Xildhibaanno ah ayaa gaaray Magaalada Baladweyn ee Gobolka Hiiraan si ay wax badan uga ogaadaan xaaladaha deegaanada Gobolkaas iyo dhiirigelinta Ciidamada Howlgallada ka wada Magaalada Baladweyn.
Markii Wafdiga Xildhinaanada ah ay ka dagtaeen Garoonka Magaalada Baladweyn kaddib waxa ay kulan la qaateen Ms’uuliyiinta Gobolka Hiiraan Odayaasha Dhaqanka sdiyaasiin iyo Waxgarad si ay ula socdaan xaaladaha deegaannadaas ka jirta.
Odayaashii Dhaqanka Waxgaradkii iyo Siyaasiintii kulanka ka hadlay ayaa Xildhibaannada Qaranka uga warbixiyay Xaaladaha Gobolka Hiiraan iyaga oo ka codsaday in Hiiraan Xaaladeeda ay marwalba Madaxda Qaranka gaarsiiyaan.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo xildhibaan Maxame Maxamuud ayaa sheegay in Gobolka hiiraan ay u imaadeen Wadatashiyo iyo dhiirigalinta Howlgallada deegaanno badan ciidamada xoogga dalka ay kala wareegee kooxda Argagixisada ah ee Shabaab.
Guddoomiyaasha Gobollada Banaadir iyo Shabeellaha Dhexe oo Warshiiq ku sii jeeda
Duulimaadkii ugu horreeyay ee xujayda sannadkaan oo garoonka muqdisho ka billoowday+ dhageyso